Iindaba -I-AD-entsha yokunyusa
Ukunamathela ezintsha, ukugcina isantya kunye Times, ukufuna umoya ogqibeleleyo lweshishini MAXIMA yenza iinzame ezinkulu ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kunye ezintsha rhoqo, rhoqo ngaphaya. U-MAXIMA ebesebenza ekuphuculeni i-Heavy Duty Wireless Column Lift ngokwembonakalo kunye nomsebenzi ukusukela ngo-2011. Okokugqibela, i-MAXIMA yenza impumelelo emva koyilo ngononophelo kunye nohlolo.
Ngokwembonakalo, kukho inkangeleko entsha kraca enemibala emhlophe kunye neblowu. Nceda ubone umfanekiso ongezantsi. Ekuphakamiseni imbonakalo entsha, kukho enye i-9 'enkulu yokuthinta umbala wescreen, ebonisa ikhowudi yempazamo ehambelanayo kunye namanyathelo aneenkcukacha akhokela abasebenzisi ukulungisa iimpazamo, eziququzelela ukusebenza okufanelekileyo. Imibala emitsha inomtsalane kwaye iyothusa.
Ngexesha lomsebenzi, i-MAXIMA iphuhlise imisebenzi emitsha yoqhagamshelo simahla. Unxibelelwano lwasimahla luthetha ukuba zonke iikholamu ziyafana; Iikholamu ezinomthamo ofanayo zinokuzibandakanya ngokukhululekileyo njengokuseta nangaliphi na ixesha. Umzekelo, kukho i-16 yokunyusa ngaphandle kwentambo ngomsebenzi woqhagamshelo simahla, ungakhetha naziphi na iziqwenga zazo ukuba zibeke iqela njengoluhlu olunye, ezinje nge-2-, 4-, 6-, 8-, okanye ukuya kuthi ga kwiikholamu ezili-16, ngocwangciso olulula -ups, esekwe kwimodeli esisiseko engenazingcingo. Lo msebenzi uyawushiya umxholo wekholamu ephambili kunye neekholamu zamakhoboka. Zonke iilifti zinokuba yeyona kholamu iphambili kwaye zibeke amaqela naziphi na iinombolo zamakholamu aphantsi komthamo ofanayo noseto loseto olulula.
I-MAXIMA iya kuqhubeka nokuzinikela kuko konke ukulandela intengiso kunye nokukhokela kunye nokuhamba, kusebenza ekuphuculeni nasekugqibeleleni kweemodeli ezintsha zeLight Coluty Lift. Kwixesha elizayo elingekude, i-MAXIMA iya kwenza into ebonakalayo ngakumbi kwaye iphuhlise imisebenzi emininzi yokwenza ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kunye nolondolozo. Nceda ugcine ulindelo kunye nombulelo ngokuqwalaselwa kwakho.